Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Milk types နွားနို့အမျိုးအစားများ
Milk types နွားနို့အမျိုးအစားများ
Tue, Aug 6, 2013 at 4:06 PM
အသဲအဆီဖုံးသူအတွက် ဖြေပေးတာတွေက အရမ်းကိုပြည့်စုံလှပါတယ်ဆရာ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ နောက်ထပ် သိချင်တာလေး နဲနဲမေးပါရစေ။ ရိုးရိုးနွားမှရတဲ့နွားနို့နဲ့ အဆီထုတ်ပြီးသား နွားနို့ဘူးနဲ့ ဘယ်ဟာ ကောင်းသလဲ။ အဆီထုတ်ပြီးသား နွားနို့အမှုန့်ရော သောက်လို့ရပါသလားဆရာ။
နွားနို့အမျိုးအစားတွေကို အထဲမှာ အဆီပါဝင်မှုအရခွဲခြားရင် အမျိုးအစား (၅) မျိုးရှိပါတယ်။
1. Standardized milk စံချိန်ကိုက်နွားနို့၊
2. Whole milk ဘယ်လိုမှ ပြုပြင်မထားတဲ့နွားနို့၊
3. Reduced-fat milk (2%) အဆီလျှော့နွားနို့၊
4. Low-fat milk (1%) အဆီနည်းနွားနို့ နဲ့
5. Skimmed milk/non-fat milk အဆီထုတ်ထားတဲ့နွားနို့်တွေဖြစ်တယ်။
၁။ Standardized milk စံချိန်ကိုက်နွားနို့ဆိုတာ ကျွဲနို့နဲ့ အဆီထုတ်ထားတဲ့နွားနို့်ကိုရောထားတယ်။ Fat အဆီ ၅့၆% နဲ့ Solid not fat (SNF) က ၈့၅% ပါတယ်။
၂။ Whole milk ဘယ်လိုမှ ပြုပြင်မထားတဲ့နွားနို့ထဲမှာ Fat အဆီ ၃့၂၅% နဲ့ solids by weight က ၈့၂၅% ပါတယ်။ သူ့ကိုသောက်ရင် လယ်လိုရီ ၅ဝ%ကို အဆီကနေရမယ်။ အဆီပဝင်မှု များတာကြောင့် မွေးစကလေးတွေနဲ့ ၂ နှစ်သားအထိ ကလေးငယ်တွေအတွက် အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်တယ်။
၃။ Reduced-fat milk (2%) အဆီလျှော့နွားနို့ထဲမှာ Fat အဆီ ၂% သာပါတယ်။ အလေးချိန်အပေါ် မူတည်ပြီး တွက်ထားတာ ဖြစ်တယ်။ နွားနို့ရဲ့ အလေးချိန်ဟာ ပါနေတဲ့ရေအလေးချိန်ကများတယ်။ ရေက်နည်းအောင်လုပ်လိုက်ရင် အဆီရာနှုးန် များစေမယ်။ ကယ်လိုရီဟာ အဆီကနေ ၃၅% ရစေတယ်။
၄။ Low-fat milk (1%) အဆီနည်းနွားနို့ထဲမှာ အဆီ ၁% သာပါတယ်။ ကယ်လိုရီဟာ အဆီကနေ ၂၃% ရစေတယ်။
၅။ Skimmed milk/non-fat milk အဆီထုတ်ထားတဲ့နွားနို့်ဆိုတာ အဆီကို အတတ်နိုင်ဆုံးထုတ်ယူထားတယ်။ ဒါတောင်မှ ဝ့၅% အထိပါနိုင်သေးတယ်။ နွားနို့တခွက်ထဲမှာ အဆီ ဝ့၅ ဂရမ်ထက်တော့မများဘူး။ အဆီကနေရမဲ့ ကယ်လိုရီ ၅% သာရှိမယ်။ လူကြီးတွေအတွက် အသင့်လျှော်ဆုံးနွးနို့အမျိုးအစားဖြစ်တယ်။